Amacandelo kunye neenqobo ezisemgangathweni zixhamle kwaye zonzakaliswa ngurhulumente omtsha | Ezezimali
Amacandelo kunye neenqobo ezisemgangathweni zixhamle zonzakaliswa ngurhulumente omtsha
Urhulumente omtsha oza kuba nayo iSpain kwezi nyanga zizayo kufuneka ancede abatyali zimali abancinci nabaphakathi ukuba benze kakuhle xa beyila isicwangciso-qhinga sabo sokuphuhlisa ipotifoliyo efanelekileyo kunye nokulingana kwezokhuseleko kwiinyanga ezizayo. Zombini malunga neenkampani kunye namacandelo akhoyo kwiimarike zezabelo. Apho kuyakubaluleke kakhulu ukukhetha iindlela ezikhethiweyo gcina ngokucacileyo uptrend kwaye ngaphezu kwayo yonke into enokuhlaziywa kwakhona okunomdla ngokungathandabuzekiyo.
Kungenxa yokuba akukho mathandabuzo okuba kuya kubakho abaxhamli kunye nabaphulukene kakhulu ekwenziweni kwesigqeba sikazwelonke esitsha. Apho kunokwenzeka ukuba kukho Umahluko omkhulu kulungelelwaniso lwamaxabiso abo kwaye oko kunokuba nefuthe kwinzuzo yabo ukuba inomdla ngakumbi kwimidla yethu yobuqu. Ngelixa kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba iya kuba sesona sicwangciso-qhinga sotyalo-mali esomeleleyo sokuba neephothifoliyo ezilondolozayo okanye ezinobundlobongela. Kuxhomekeke kwiprofayili eboniswe ngabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Enye into ekufuneka ifuthe kuyo ngamaxabiso omvuzo oguqukayo onokuthi usebenze ngcono ngamafutshane. Kwelinye icala, ngaphandle kokulibala ukuba ungafumana ezinzileyo kunye nokuqinisekisa ngenzuzo rhoqo ngonyaka Ngokusasazwa kwezahlulelo kubanini zabelo. Ngembuyekezo yokonga ukuya kuthi ga kwi-9%, nokuba kwenzeka ntoni kwiimarike zezabelo, ngaphakathi nasekhaya nakwamanye amazwe. Ukuze ngale ndlela, ube nokuzola ngakumbi kule minyaka imbalwa izayo. Isicwangciso esikhethekileyo esijolise ekwenzeni ingxowa yokonga yexesha eliphakathi nelide.
1 Ukhuseleko olonzakaliswe ngurhulumente
2 Eyona nto ibalaseleyo kwi-Ibex 35
3 Uluhlu olubi lwe-Ibex 35 lwaphukile
Ukhuseleko olonzakaliswe ngurhulumente
Phakathi kwamaxabiso aya kuchaphazeleka kakhulu kukusekwa korhulumente omtsha, i-Ence ibalasele ngaphezu kwako konke. Kungenxa yokuba isigqeba sobusoshiyali sinokuthetha oko amathandabuzo ngesityalo sakho ePontevedra qhubeka ukusukela ngoku ukuya phambili kwaye ingavalwa. Ngokwehla kweseshoni elandelayo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezi-4 kumaxabiso. Kude kube ngoko yayiyenye yezona zinto zixabisekileyo ze-equities zesizwe, ngoxabiso lonyaka lwe-10%.
Elinye lawona macandelo achaphazelekayo alinakuba lelinye ngaphandle kombane. Akumangalisi ukuba kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba ezi ntlobo zeenkampani zihlala zikhokelela ekusikeni emva konyulo, kuba ukusebenza kwazo kuxhomekeke ikakhulu kummiselo. Ngenxa yezi zenzo, bekulokhu kunjalo Iberdrola enye yezona zininzi yehle ngezi ntsuku, yehla kufutshane neepesenti ezimbini zamanqaku. Emva kokuba iboyisile ngaphambili isithintelo esibalulekileyo ebenaso kumanqanaba ee-euro ezingama-8 ngesabelo ngasinye. Njengo-Endesa nge-0,81% kunye ne-Red Eléctrica Española ene-0,3%.
Eyona nto ibalaseleyo kwi-Ibex 35
Ngelixa ngokuchaseneyo, amaxabiso aphezulu ezabelo zamashishini ezingenanzala emisiweyo kuzwelonke, nangokuchasene nazo zonke iingxaki ebezikho kubameli becandelo leebhanki. Ngokunyuka kwamaxabiso abo ngemida ukusukela kwi-1% ukuya kwi-4%. Ukuya kuthi ga kwinqanaba elikhulu kuba bathathe isaphulelo sokuba i-PSOE ingavuma kwisivumelwano sikarhulumente kunye nee-Cs. Kodwa ukuya kuthi ga kolu luqikelelo lungafikeleli kwiziqhamo, ziya kuba zezona zinomdla ekuphuhliseni ilahleko enzima. Njengoko bekusenzeka oko ukusukela ekuqaleni konyaka, ukuba lelinye lamacandelo emarike yemasheya ohlwaywe kakhulu ziarhente zezemali.
Kwelinye icala, iinkampani zasekhemesti zezinye zezona zixhamle kakhulu kuba banokuzuza kumanyathelo athile abanokuwathatha kwisigqeba esitsha. Ukuya kwinqanaba lokuba kuqatshelwe ukwanda komthamo wokuqesha, kwaye ngendlela engaqhelekanga ngalo mzuzu. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Ukuba lelinye lamacandelo apho kuya kufuneka ubeke iliso ukusukela ngoku. Kungenxa yokuba akukho mathandabuzo ukuba kuninzi imali ekufuneka yenziwe ngezi ntlobo zesitokhwe.
Uluhlu olubi lwe-Ibex 35 lwaphukile
Enye yeedatha esiziziswe lolo suku lonyulo kukuba iziphumo zonyulo azifunyenwanga ngokuwa, njengoko kwenzekile kule minyaka idlulileyo. Ngokukodwa, ukusukela nge1988, nangona kuyinyani ukuba inkqubela phambili yayo ibithobekile, kuphela Ngaphantsi kancinci kunenqaku lepesenti. Nangona banokuxabiswa yimarike yestokhwe kwiinyanga kamva kwaye apho kunokuthi kwenziwe ukusikeka okunokuba nzima kakhulu. Ingakumbi ukuba idityaniswe notshintsho lwendlela kwiimpawu eziphambili zelizwekazi lakudala.
Ngelixa kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba yonke into ibonakala ngathi ihamba ngamandla zizandla ezomeleleyo zeemarike zezabelo. Umbono ogcwele kwinxalenye enkulu yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Apho zikhona ezinye iindlela ezingakumbi ezinokunceda umtyali-mali ukuba enze le nkqubo kwaye azikho ezinye ngaphandle kwezo zibonelelwa yimithombo yeendaba ekhethekileyo, ebandakanya uhlalutyo lobuchwephesha nolusisiseko, iingcebiso zezona zibaluleke kakhulu okanye abarhwebi, ezesizwe nezamazwe aphesheya, iindaba eziqinisekisiweyo kunye neziganeko eziphambili ezichaphazela ukhuseleko oludweliswe kwimarike yemasheya.
Ke ngoko, isilumkiso esikhulu kunye nesilumkiso xa kuvavanywa esi sixhobo sifumanekayo kumnatha, kuba kunokuba mnandi kakhulu ukutyelela kwaye uthathe inxaxheba kuzo, kodwa xa kufikwa kwimali yethu, yeyiphi into ekufuneka yenziwe ngabatyali mali abancinci ukufikelela ezandleni. Iingcali zentengiso yesitokhwe ezizakuyalela into ekufuneka yenziwe okanye engafanele ukwenziwa ngalo lonke ixesha. Kwezinye iinyani oko Khange babenampembelelo ingako kwiintshukumo phakathi konikezelo kunye nemfuno ekuhambeni kwamaxabiso esitokhwe esitokhwe. Ingakumbi ukuba idityaniswe notshintsho lwendlela kwiimpawu eziphambili zelizwekazi lakudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Amacandelo kunye neenqobo ezisemgangathweni zixhamle zonzakaliswa ngurhulumente omtsha
Iimveliso zotyalo-mali kunye nezicwangciso